Eqhutywa Ngunaphakade - Cloud Library
‹ Hiya kwi qweqwe leSingesi
ilwimi langoku: isiXhosa
Ekhaya - Iincwadi - Eqhutywa Ngunaphakade
Utitshala: John Bevere
Zifumaneka ngawo wonke amalwimi:
Ubomi emhlabeni bungumphunga, kanti isininzi sethu siphila ingathi akhonto kwelinye icala. Kodwa indlela esiphila ngayo obubomi izakumisela ukuba simphila njani unaphakade. Isibhalo sisixelela ukuba kuzakubakho indidi ngendidi zezibuyiselo zamakholwa-zisukela ekubukeleni yonke into umntu ayifezekisileyo iqwengwa kwisigwebo, uyokutsho ekulawuleni noKristu ubuqu Bakhe.
Ekuthatheni kwimigaqo ku 2 KwabaseKorinte 5:9-11, uJohn Bevere isukhumbuza ukuba wonke amakholwa azakuma phambi kaKristu kwenzele bafumane abakuzuza ebomini. Isininzi sethu sizakothuka xa siva ukuba ixesha elininzi lethu silichithe kwizinto ezingabaliyo kwinzuzo zanaphakade.
Singabuphuhlisa njani ubomi obubalulekileyo? Ku Eqhutywa Ngunaphakade, uya kufunda ukufumana ubizo lwakho kwaye wandise loo nto uThixo akunike yona. Xa ufumana umbono onaphakade uzakuxhotyiswa ukuba usebenzele izinto ezihlalayo.
Khuphela (~3.08 MB)
Yabelana ngebali lakho
Izixhobo ezikwi Cloud Library sisipho kuwe! Uyakhuthazwa ukuba ungazi phinda phinda, uzisasaze kwi intanethi, usebenzise izicatshulwa okanye wabelane ngezizixhobo nabanye. Zive ukhululekile ukuba ungafaka ezivideos ne fayili ze odiyo ku YouTube, TuDou, Youku okanye amanye amaqweqwe abelana nge ndaba beka ikhonkco eliya kwi Cloudlibrary.org kwi qweqwe lakho le intanethi uncede abanye bafumane ezizixhobo. Uthumele nge intanethi I eBooks kwamalungu wecawe, kwa bafundi besiKolo seBhayibhile, ezinye inkokheli ocinga ukuba zingabanoyolo ngokufumana ezizixhobo nge lwimi labo.